Lapho ukuzila kwezinga le-glucose yegazi kungaphansi kunokujwayelekile ...- Isifo Sikashukela Sikhuluma-Sinocare
Lapho izinga le ushukela wegazi lishesha kunokujwayelekile ...
Isikhathi: 2019-09-11 Hits: 653
l Iphansi lapho ukuzila ukudla kweglucose kungu-2.8-3.99
① Inani elijwayelekile le-glucose yegazi lokuzila ukudla okungekho sikashukela liphakathi kuka-3.9-6.1mmol / L.
②Inani elijwayelekile le-glucose yegazi yokuzila ukudla okufanele lilawulwe phakathi kuka-4.4-7.0mmol / L.
Iziguli ezingezona isifo sikashukela: inani lakho le-glucose lingaphansi kancane (i-glucose yegazi <2.8mmol / L ibizwa nge-hypoglycemia). Uma uzizwa ungaphathekile kahle, thatha ukudla okuncane ukuze ukudambise.
Iziguli ezinesifo sikashukela: i-glucose yegazi lakho iphansi. Noma ngabe unovalo olungazi lutho, indlala, ukuxhawulwa ngesandla nezinye izimpawu ze-hypoglycemia, kufanele uthathe u-15-20 amagremu kashukela noma ukudla okunoshukela ngokushesha bese uphinde uzame i-glucose yegazi ngemuva kwemizuzu eyi-15. Uma i-glucose yegazi isephansi, bese udla amanye amagremu ayi-15-20 wokudla okunoshukela bese uphinde ulinge i-glucose yegazi ngemuva kwemizuzu eyi-15. Gcina ukuqaphela uma i-glucose yegazi inyuka. Imbangela ye-hypoglycemia kufanele iqondwe kahle ngemuva kokuthi i-glucose yegazi ibuyele kokujwayelekile.
Kunconywa ukuthi udle njalo. Uma ungakwazi ukudla ngesikhathi, kufanele udle amabhisikidi, izithelo nokunye ukudla ngaphambi kwesikhathi. Kufanele uzame ukukhetha ukudla okomile (okufana nebhanana elishubile, irayisi, njll.) Lapho udla ukudla okuyisisekelo. Ukumuncwa kokudla okomile kuhamba kancane, okunganciphisa ukukhuphuka kweglucose yegazi le-postprandial futhi kugcine isikhathi eside, ngaleyo ndlela kugwenywe i-hypoglycemia yesidlo esilandelayo. Kufanele futhi ugweme ukuphuza ngokweqile nokuphuza esiswini esingenalutho.
Ukuvivinya njalo kungasiza ukulawula i-glucose yegazi. Kunconywa ukuzivocavoca ngaphansi kokuqondiswa uchwepheshe futhi uthole izinga le-glucose yegazi ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuzivocavoca esigabeni sokuqala sokuzivocavoca. Lapho inani leglucose lingaphansi kuka-5.6mmol / L, amanzi amnandi noma iziphuzo ezinoshukela kufanele zengezwe ngaphambi kokuzivocavoca futhi zivikele ukuzivocavoca esiswini esingenalutho.
Ikhasi Langaphambili: Ukuthi udlani uma uhlushwa i-hypoglycemia?
Ikhasi elilandelayo: Sifika kanjani isifo sikashukela?